पेट घटाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी १८ उपाय – Hotpati Media
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०६:०० मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १५ मिनेट
पेट लाग्नु र मोटाउनु अस्वस्थ शरीरको सूचक हो। तर अहिले पनि कतिपय समाजमा पेट लाग्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ। मोटोपन आम कुनै रोग होइन तर मोटाउन थालेपछि हाम्रो शरीरमा अनेकौं रोगले घर बनाउन थाल्छन्। त्यसमा पनि पेट बढ्नु वा पेटको मोटाइलाई चिकित्सा विज्ञानले मुटुरोग, मधुमेह, दम, उच्च रक्तचाप, पेट तथा हर्मोनसम्बन्धी रोगहरूको प्रमुख कारक मानेको छ। हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै बोसो लाग्ने क्षेत्र पनि पेट नै हो। यो भागमा बोसो लागिसकेपछि यसलाई घटाउन असाध्यै गाह्रो पर्छ। बढेको पेटबाट ‘ल्याक्टिन घेरिन एडिपोनेक्सन’ जस्ता हानिकारक तत्व निस्कन्छन्। यी तत्वहरूले टाइप टु मधुमेह, मुुटुरोग र अन्य धेरै रोग लाग्छन्। एकपटक पेट बढेपछि घटाउन मुस्किल पर्छ। तर निम्न प्राकृतिक उपायहरूको अवलम्बन गरे केही समयभित्र पेट घटाउन सकिन्छ।
१. फाइबरयुक्त खाना
हामीले खाने खानामा पाइने फाइबरले कुनै पौष्टिकता त दिँदैन तर फाइबर भएका खानाले अनेकौं फाइदा पु-याउँछ। घुलनशील फाइबर खाँदा त्यो पानीमा घुलेर खानालाई फुलाइदिन्छ। खानेकुरा फुलेपछि यसले भोकलाई चाँडै तृप्त गरिदिन्छ भने खानाको पाचन क्रियालाई सुस्त तथा क्यालोरी अवशोषणलाई पनि कम गरिदिन्छ। अध्ययन अनुसन्धानहरूको निचोड भन्छ– १० ग्राम घुलनशील फाइबरको अतिरिक्त प्रयागले पेट बढ्ने क्रियालाई ३.७ प्रतिशत कम गर्छ।
घुलनशील फाइबरको मुख्य स्रोत भनेको सामा, कगुनी चामल, चिनो चामल, कोदो, जबार, बाजरा, आलस, आबोकाडो, ब्ल्याक बेरी, दाल, गेडागुडी, हरिया सागपात आदि हुन्।
लामो समय राखेर खान मिल्ने बनाइएका खानाहरूलाई संरक्षित खानेकुरा भनिन्छ। खानेकुरा संरक्षण गर्न अनेकौं किसिमका केमिकल तथा चिनी, नुन, तेलजस्ता तत्वहरु हालिएको हुँदा यस्ता खानेकुराहरूले तौल बढाउँछन्। यसैकारण यस्ता खानेकुराबाट टाढा रहनुपर्छ।
बढी कार्बोहाईडटयुक्त खाना खाँदा थप कार्बोहाईडेट सी फ्याटमा रुपान्तरित भई बोसो लाग्छ। यसर्थ पेट घटाउने हो भने थप कार्बोहाइडको प्रयोग नगरौं।
#पेट घटाउने उपाय